Af-Soomaali 4.3, Unicef 2001
Fasalka 4aad • Cutubka 3aad
Dhaqso u dul mar casharkan.
1. Sheeg saddex qaybood ee jirka ka mid ah ee casharka ku jirta.
2. Sheeg saddex nimco ee Alle ina siiyey ee casharka ku jirta.
Allaha ina abuuray, waxa uu ina siiyey nimcooyin fara badan, waxana ka mid ah: caafimaadka, cuntada iyo biyaha. Waxa kale ee Alle ina siiyey xubno kala duwan ee jirka ka mid ah ee hawlo u qabta, waxana ka mid ah: afka, sanka, dhegaha, indhaha iyo carrabka.
Waxaa carrabka laynoo siiyey in aan ku hadalno oo aan ku sheegno waxa fiican oo Rabbi raalli ka yahay. Waa in carrabkeenna aanan dadka ku caayin. Rasuulkeennu (NNKH) waxa uu yiri: "Qofku waa in uu wax khayr ah ku hadlaa ama uu iska aammusaa. Hadal dhaadheer ee dadku dhibsanayo waa in aad iska ilaalisaan."
Indhuhu xaq weyn ayaa ay nagu leeyihiin, sababta oo ah waa nimco Alle inoo siiyey in aan wax wanaagsan ku aragno waxna ku akhrisano. Waxa ay ka mid yihiin xubnaha ugu xasaasisan jirka qofka oo laga doonayo in mar kasta uu nadiifiyo kana ilaaliyo waxa Alle agtiisa ku xun sida shaneemooyinka iyo ciyaaraha qofka akhlaaqdiisa xumaynaya oo dhan.
1. Qofka goorma ayaa loo oggol yahay in uu hadlo?
2. Sidee baa nalaga rabaa in aan u hadalno?
3. Allaha koonkan abuuray waxa uu amray ninkii ka leexda maxaa uu rabaa?
4. Haddii aadan caafimaadkaaga ku dadaalin maxaa kugu dhici kara?
Cutubkii 2aad waxa aad isticmaashay tilmaamo lagu sifaynayo dad. Sida oo kale waxa aan isticmaali karnaa tilmaamo lagu sifaynayo sheeyaal.
Ka feker walax.
* Sidee buu u weyn yahay?
* Sidee baa loo dareemaa?
* Maxaa uu ka samaysan yahay?
* Sidee buu u culus yahay?
Dabadeed u sharrax sheygaas saaxiibbadaa.
Waa uu weyn yahay.
Waa wareegsan yahay.
Waa uu adag yahay.
Waxa uu ka samaysan yahay saan ama maro.
Aad ayaa uu u culus yahay.
Maxaa uu yahay?
Dabadeed weydii saaxiibbadaa shaygu waxa uu ahaa.
Jawaabtu waa "banooni".
aammusaa är tyst
akhlaaq -da uppförande, moral, disciplin
amraa befaller, beordrar
asluub -ta gott uppförande
caafimaad -ka hälsa
caayaa sårar, förolämpar
daddaalaa anstränger sig
dareemaa känner, upplever
dhibasadaa, -sataa blir irriterad
dul maraa far över
hawl -sha arbete
il, indho källa, öga
iska ilaaliyaa avhålla sig från, akta sig för
khayr -ka något bra
koon -ka skapelsen, världen
leexdaa, leexataa vända sig bort
nimco resurs från naturen, överflöd, välstånd
oggol yahay tillåter, accepterar
raalli -ga välbehag, tillfredsställelse
shaneemo -da film
xaq -a rätt, rättvis, rättighet
xasaasi ah känslig, ömtålig
xubin -ta kroppsdel